1954-1964 Evinrude Johnson 5.5 HP Carburetor Tune-Up | Outboard Boat Motor Repair
Ho any amin'ny fizarana lehibe votoaty
Tetik'asa fanitarana sy fizaran-tariby
Evinrude sy Johnson 1979 sy teo aloha
Johnson 5.5 HP soavalin-dranomasina
5.5 HP Johnson 1960 Modèle CD-17
Johnson 10 HP soavalin-dranomasina
Aluminium Fishing Boat Ampodio
5.5 HP soavalin-dranomasina
10 HP soavalin-dranomasina
Aluminum Boat Ampodio
Boky - Boky fanamboarana serivisy
Miditra / OUT
Login amin'ny Facebook
Na oviana na oviana ianao dia manana motera taloha nipetraka kelikely, dia azonao atao ny mieritreritra fa mila serivisy ilay carburetor. Ny gazy, indrindra rehefa afangaro amin'ny diloilo dia hivadika ho verinia na raha tsy izany dia hikopy ny carburetor anao ary hihinana ireo gasket. Na dia maro aza ireo fitaovana manampy amin'ny fanadiovana carburetor azonao apetraka ao anaty fitoeranao solika na hamafazana mivantana ao anaty carburetor dia tsy hanakaiky ny fanatanterahana ilay zavatra mitovy amin'ny carburetor tuning izy ireo. Na dia voatahiry tsy misy solika ao anaty carburetor aza ny motera dia mety ho maina sy hitresaka na hiharatsy haingana ireo gasket rehefa manandrana mampiasa azy indray ianao. Ny fomba tokana ahazoana antoka fa hiasa tsara ny carburetor dia ny manala, manala, manadio ary miangona miaraka amina kit kitapo carburetor vaovao, manolo ary manao fanitsiana. Ireo no dingana hanatanterahana tononkira karburator.
Ny carburetor dia fitaovana tsotra, mora vidy ary voaporofo ara-potoana izay mampifangaro tsara ny rivotra sy ny solika alohan'ny hidirany ao amin'ny efitrano fandoroana. Ny carburetor ho an'ity motera ity dia ilay carburetor iray ihany izay ampiasaina amin'ny motera ivelany ary eny amin'ny bozaka bozaka Lawn-Boy aza. Betsaka ny faritra kely izay tsy tianao hovahana ka tsara kokoa ny manana faritra asa madio sy voalamina.
Ny carburetor dia ao anatin'ny rafitra Fuel ankapobeny izay manomboka amin'ny tobin-tsolika sy ny tsipika solika. Ny tanky niaraka tamin'ireo motera niisa 50 dia fiara mifono vy nisesisesy. OMC taty aoriana dia afaka tamin'ny fampiasana fiara mifono vy voahosotra tamin'ny taona 60 ary nandeha tamina fiara mifoka sotro tokana. Raha jerena ny toetoetran'ny tanky sy ny lasantsy misy ahy dia nanapa-kevitra ny hiova ho tankina tokana maoderina kokoa aho amin'ny alàlan'ny fampidirana paompin-tsolika Mikuni, izay nividianako an-tserasera teo amin'ny $ 22.00, ary nifanakalo ireo mpampitohy ny solika amin'ny andalana tokana nitendry. KITIHO ETO Hijery ny famaritana sy ny sarin'ny tetikasa fanavaozana ahy.amin'ireo fiara mifono vy vaovao. Raha mikasa ny hitazona ny zava-boahary rehetra amin'ny moto ianao, dia misy kitapo azo soloina ny tsipika, ny mpampitohy ary ny tombo-kase ho an'ny fiara mifono vy.
Misy sivana solika ho an'ity motera ity miraikitra amin'ny faran'ny vilia carburetor. Ity sivana ity dia lovia fitaratra natao hamandrihana rano sy antsanga ary tokony hesorina ho fanadiovana indraindray. Azonao atao ny manamarina fa ny fitoeran-tsolika ampiasainao dia madio sy tsy misy verinia, harafesina na solika taloha. Fomba fanao tsara ny manary solika tsy ampiasaina ary manomboka amin'ny solika vaovao ny vanim-potoana tsirairay. Ny lasantsy izay vidinao anio dia tsy mitahiry saika ny taloha raha tsy tamin'ny taon-dasa. Raha azo atao koa, alaviro ny lasantsy misy alikaola na etanol ao anatiny satria toa manintona hamandoana ireo solika ireo ary mitaona rano ao anaty lasantsy ianao. Matetika ny fiara dia mandoro solika misy tobin-tsolika isan-kerinandro fa ny sambo, raha tsy ampiasaina matetika dia mety hiteraka solika ratsy. Mahagaga ny isan'ny olona mieritreritra fa afaka mihazakazaka amin'ny motera misy solika efa taona maro.
Ny fifangaroan'ny solika / solika amin'ity motera ity dia 24: 1. Ity dia mety hahatratra 16 ons an'ny menaka cycle 3 an'ny TCW-2 ho an'ny tanky 3-galona misy petrol 87 untaned na 32 grama ho an'ny tanky 5-galona .. ny menaka motera 2 dia nivoatra nandritra ny taona maro. Ny menaka boribory 2 farany sy tsara indrindra misy ankehitriny dia hanana naoty TCW-3. Misy ny atao hoe TCW-2 sy ny dikan-teny taloha fa ny tombony hampiasana ny solika vao haingana dia ny fanosotra tsara kokoa anao ary ny fihenan'ny karbona noho ny amin'ireo menaka taloha. Ny torolàlana fampifangaroana tany am-boalohany ho an'ireo motera taloha ireo dia miresaka momba ny tahan'ny lasantsy 16: 1 amin'ny menaka motera mavesatra 30 lanjan'entana fa tsy maintsy tadidinao fa be ny niova nanomboka tamin'io fotoana io. TCW-3 no naoty amin'ny menaka tsingerina 2 azonao vidiana anio. Raha manana menaka TCW-2 taloha ianao mipetraka, mandrosoa ary ampiasao, angamba miaraka amin'ny tanky hafa rehetra mandra-pahalany azy. Ary koa, tsy misy tombony ny fampiasana oktana avo kokoa na solika mitarika, ka miforà amin'ny lasantsy 87 oktana tsy dia lafo ary ho faly ny moto anao. Ny motera 2 vaovao dia mampiasa fifangaroan-menaka 50: 1 saingy tsy ampy menaka ho an'ny moterao io noho ny karazan-tsofina misy ao anatiny. Aza mampiasa na inona na inona ambany noho ny fifangaroan'ny 24: 1 na mety hanimba ny moterao.
Ny carburetor dia mampifangaro ny habetsaky ny rivotra sy ny solika ao anaty fangaro atody. Ny habetsaky ny fifangaroan'ny solika / rivotra avela miditra ao anaty varingarina dia mamaritra ny hafainganana sy ny heriny. Ny solika sy ny rivotra dia mifangaro ao amin'ny venturi, izay antsoina matetika hoe barika. Ity carburetor tsotra ity dia iray barika fotsiny. Ny venturi dia fameperana tsotra fotsiny ao anaty carburetor izay tsy maintsy andalovana ny rivotra mifoka ao anaty motera. Rehefa mandalo io fetra io ny rivotra dia mihafaingana izy ka miteraka tsindry ambany kokoa hitsentsitra solika amin'ny alàlan'ny fiaramanidina mamoaka solika ao anaty venturi izay mivadika ho etona. Ny jet dia manintona ny lasantsy avy amin'ny lovia carburetor izay misy tahirin-tsolika kely ao anaty lovia carburetor. Ny habetsaky ny solika ao anaty vilia karburetor dia fehezin'ny fivorian'ny float sy float izay mitazona ny lovia feno solika. Valve fanjaitra avo sy haingam-pandeha no manitsy ny tahan'ny solika amin'ny rivotra ao anatin'ny fetra kely. Ny habetsaky ny rivotra miditra ao amin'ny barika carburetor dia fehezin'ny valizy lolo izay mivadika amin'ny volan'ny throttle.
Ity karburator ity koa dia misy kenda. Rehefa misintona eo alohan'ny môtô ny bokotra bokotra ianao dia mihidy ny valizy lolo faharoa izay miakatra ambony amin'ny venturi ka miteraka solika avo kokoa amin'ny fifangaroan'ny rivotra izay takiana mba hananganana motera mangatsiaka. Rehefa manomboka ny moto anao ianao dia mila manidy ny kenda amin'ny fisintonana ny bokotra kenda. Raha vantany vao "mipoitra" na "sputters" ilay motera dia azonao atao ny manidy ny kenda satria efa vonona hiasa ara-dalàna ny carburetor.
Johnson soavalin-dranomasina 5.5 Carburetor nipoaka View
Dia mila mividy
Carb Kit NAPA Fizarana laharana 18-7043 na fanoloana ny OMC ampahany laharana 382047, 3832049, 383062, 383067, na 398532
Nandoa $ 15.49 aho, tsy nampiditra float io kit io. Raha ilaina dia azonao atao ny mividy azy misaraka amin'ny $ 3.00
Carburetor Tune-Up Kit
Carb Kit OMC ampahany laharana 382045 na 382046 NAPA / Sierra ampahany laharana 18-7043
Manohana ny tranonkala: Tsindrio eto raha hividy izany amin'ny Amazon.com
Esory ny anoloana sy Air Panel Silencer
Esory ny screws izay mihazona ny mangeja Button, miadana sy haingam-pandeha Control kiboriny, ka solafaka ny tontonana eny mandroso ary.
Carburetor Front Pannel
Esory Control kiboriny
Front Pannel nesorina
Esory ny nampirina entana bazana ny hafainganam-pandeha miadana fiaramanidina.
Esory Slow Speed ​​fonosana-bazana
Slow Speed ​​fonosana-bazana
Esory 4 screws mihazona ny rivotra silencer ary avy eo hanala ny rivotra silencer amin'ny alalan'ny mandroso dia nanandratra izy.
Esory Air Silencer Screws
Asandrato ary Esory Air Silencer
Elektrônika ny fihenjanana loharano izay mihazona ny fotoana mialoha fanoitra kodiarana manohitra ny fotoana mialoha fipetrahany izy.
Esory Timing mialoha olana Spring
Esory ny fifandraisana amin'ny throttle. Ampiasao ity sary eto ambany ity ho toy ny referansa amin'ny famerenana. Esory ny visy raha ampy fotsiny mba hialan'ny rohy.
Esory Throttle Linkage
Esory ny clip retainer ho an'ny lever mialoha. Tandremo sao mamaha ity clip ity. Slide ny levera mialoha amin'ny fotoana mahitsy ary esory.
Advance fotoana Lever Clip
Tamin'ny 7 / 16 wrench, hanala ny roa voanjo izay mihazona ny carburetor vatana ny fihinanana be.
Raha misafidy ianao, dia afaka manamboatra kitapo solika sy fantson-tsidoka ianao raha tsy ao anaty fiara ny carburetor anao. KITIHO ETO hahita ny fomba ho an'ity fanavaozana.
Disassemble ny Carburetor Filter
Ity carburetor ity dia manana sivana solika fitaratra eo am-pototry ny karburatera. Esory ny vilia fitaratra. Esory ny voanjo "sprocket" kely ary esory ny varingarina sivana. Esory ny gazy vita amin'ny fingotra boribory. Zava-dehibe ny fanadiovana ireo faritra rehetra ireo. Aza manondraka carburetor cleaner amin'ny gasket fingotra satria mety ho levona ilay fingotra. Ity gasket ity dia zava-dehibe amin'ny famoronana tombo-kase maranitra amin'ny vilia fitaratra.
Disassemble ny Carburetor
Esory ary esory ny fiaramanidina haingam-pandeha avo sy miadana avy eo alohan'ny carburetor. Esory ny mpanasa lamba taloha. Mety mila asa kely ny fanesorana ireo mpanasa lamba efa tonta, fa hosoloanao lamba fanasan-damba vaovao kosa avy eo, avy eo ataonao ny fivoriambe.
Esory Slow Speed ​​Jet
Esory Avo-Speed ​​Jet
Carburetor fiaramanidina nesorina
Esory ny visy mitazona ny tapany ambony sy ambany amin'ny vatana carburetor. Sintomy ny antsasany. Ny gasket eo anelanelan'ny tapany roa dia hosoloina gasket vaovao amin'ny kitapo karbika.
Carburetor Body Screws
Misaraka ambony sy ambany
Ity carburetor ity dia manana float bosoa tany am-boalohany. Jereo fa mihasimba ny float ary mihary verinia. Ity carburetor ity dia tsy afaka niasa tsara raha tsy noravana, nodiovina ary natambatra tamin'ny faritra kit carbôt vaovao.
Esory Carburetor float
Esory Carburetor Bowl Gasket
Esory ny pin hinge mitsingevana. Ity pin ity dia hosoloina pin vaovao avy amin'ny kit kitapo. Esory ny float, float ary fivoriambe. Hivory miaraka amina fivorian'ny valizy mitsingevana vaovao ianao avy ao amin'ny kitin'ny carburetor tune up.
Esory hitsingevana Pin
Esory float Valve
Esory hitsingevana Valve Assembly
Esory ny baomba haingam-pandeha. Esory ny plug plastika boribory eo an-tampon'ny carburetor. Izany dia mora indrindra atao amin'ny fandavahana lavaka kely eo afovoany ary avy eo atsofohy ao anaty visy vy mba hialana amin'ny plug aluminium. Misy plug vaovao ao amin'ny kitin'ny carburetor tune up. Diovy ny faritra ao ambadiky ny plug. Vantany vao madio, soloy ny plug amin'ny alàlan'ny fanoratana kely amin'ny toerany amin'ny fantsom-biriky na tantanana kely. Tsara raha mandeha amin'ny toerana misy sarimihetsika silikao manodidina ny sisin'ny plug aluminium mba hisorohana ny fivoahan'ny rivotra.
Esory Avo-Speed ​​Nozzle
Esory Aluminum plug
Ampiasao Sokiro ny Esory ny plug
Manadio tsara ny carburetor faritra.
Atsipazo miaraka amin'ny mpanadio carburetor ny faritra metaly rehetra. Azonao atao ny mandentika ireo faritra ireo mandritra ny alina ao anaty fitoeran-kafe. Hamafa ary esory amin'ny rivotra voafehy ny faritra rehetra. Tsofy ny andalana rehetra ary alao antoka fa tsy misy sakana. Ny ankamaroan'ireto andalana ireto dia somary bitika ary mora sakanan'ny poti-dia. Tazomy amin'ny tara-pahazavana mamirapiratra ny vatana carburetor ary diniho akaiky.
Manambatra ny Carburetor
Amin'ny ankapobeny, ny famerenana indray ny carburetor dia toy ny fandalovana ny dingana famongorana fa ny mifamadika. Mety ho toa ny sary mitovy amin'ilay nampiasaina tamin'ny fanonganana sy ny fivoriambe aza ianao. Misy zavatra vitsivitsy momba ny carburetor izay ilainao hankasitrahana mba hikarakarana ny fikarakarana ilaina mba hiasa tsara ny carburetor anao aorian'ny famerenana azy. Te hivory amina faritra vaovao avy ao amin'ny kit kitiro anao ianao. Azonao atao ny manome antoka fa tsy misy vovoka, fasika, sombin-javatra ary tapa-kazo gasket na fitaovana hafa any ivelany izay mety hikatona ao amin'ny iray amin'ireo làlambe. Ny iray amin'ireo olana lehibe indrindra rehefa manangona carburetor ianao dia ny hahazoana antoka fa tsy hisy ny fivoahan'ny rivotra. Ny fivoahan'ny rivotra kely indrindra manodidina ny gasket na ny mety dia mety hahatonga ny carburetor tsy hiasa tsara. Efa nanandrana nitroka soda tamin'ny mololo misy tsindry kely kely ao aminy ve ianao? Ny famoahana rivotra kely indrindra dia hanary ny fitsipika mahitsy mifangaro amin'ny solika / rivotra izay tompon'andraikitra amin'ny famoronana ny carburetor. Makà fotoana ary ataovy izay mety. Rehefa ilaina dia jereo ilay sary nipoaka mba hahazoana antoka fa mampiasa mpanasa lamba sy gasket rehetra ianao. Tsy iray amin'ireo tetik'asa izay tadiavinao ireo faritra sisa tavela raha tsy ampahany izy ireo izay nosoloinao faritra vaovao avy amin'ny carburetor tune up kit.
Vorio ny Top antsasaky ny Carburetor
Sokiro ao amin'ny nozzle haingam-pandeha sy solafaka eo amin'ny lehibeny gasket. Fanamarihana: Ny fonosana mena milina fanasan-damba ny hita eo amin'ny sary etsy ambany dia tsy marina. Ny lehibeny gasket dia matevina, spongy, ary Tan ny lokony.
Sokiro miditra tsimoramora ao amin'ny fiangonana float. Ampidiro eto ny vaovao float fanjaitra sy mampiditra ny fanjaitra lohataona. Ny fanjaitra float taloha dia mety tsy manana loharano ny vaovao fanjaitra manana tendron'ny ravin fingotra ary mitaky ny lohataona mba tsy mifikira. Ny sarin 'ny vao na ny ela fanjaitra float miditra tsimoramora. Ny ela fanjaitra dia eo an-tampony. Tsy manana na fingotra tendron'ny ravin toerana clip ny fanjaitra lohataona. Ny float lohataona no tena zava-dehibe anie no mba tandremo sao mba hamaha izany ny fanjaitra loharano na manadino ny hametraka izany (toy ny nataoko). Mametraka ny vaovao sy mitsingevana float miankina Pin. Clip ny float fanjaitra lohataona ny float miankina.
Hanoloana Avo-Speed ​​Nozzle
Hitsingevana Valve Assembly
New float Valve avy Kit
Soloy hitsingevana Valve
Soloy hitsingevana Valve Assembly
Float New Clip Valve
Hitsingevana sy Pin
Clip ny float fanjaitra lohataona ny float miankina.
Omano ambany Half ny Carburetor
Ampiasao ny fandavahana, esory moramora ireo lavaka ao amin'ilay lavaka izay misy ny fototr'ilay fantsona haingam-pandeha. Aza hadino ny mamoaka vovoka ho an'ny vy amin'ny fantsom-panafody. Ity dia mila mamorona tombo-kase henjana amin'ny gasket boss. Atsangano indray ny sivana solika fitaratra. Hamarino tsara fa eo am-pitoerana ny lasantsy vita amin'ny fingotra hamoronana tombo-kase henjana amin'ny vilia fitaratra.
Soloy Filter Screen Gasket
Soloy nanadio Filter Screen
Soloy Filter Bowl Seal
Mampiditra ny Top sy ny ambany Half ny Carburetor
Hamarino tsara fa nilahatra niaraka tamin'ny lavaka ilay gasket. Hamafiso ny visy mba ho maranitra fa mitandrema sao manenjana loatra. Hamafiso amin'ny volo kintana ireo visy, ka atambatra mifanaraka tsara ny antsasany.
Miaraha Top sy ny ambany antsasaky ny Carburetor-kevi-pitantanana
Hametraka fonosana Washers sy ny voanjo ho an'ny Avo sy ny Slow Speed ​​fanjaitra
Atsofohy ao anaty lavaka fanjaitra avo sy miadana haingana ireo mpanasa lamba mena roa. Rehefa mihamafy ny voanjo fonosana dia hanitatra ireo mpanasa lamba ireo ary hanisy tombo-kase mihidy rivotra manodidina ireo fanjaitra avo lenta sy miadana. Hiteraka fifandonana ilaina amin'ireo fanjaitra ireo izy ireo mba hihazonany ny fanitsiana azy ireo. Amin'izao fotoana izao, ny rantsan-tànanao ihany no ampiasao handrehitra ireo voanjo fonosana. Ny voanjo fonosana lava dia lasa ambony. Mandrosoa ary manenjana ny voanjo fonosana ambany fa ny ambony kosa dia tsy maintsy esorina hamerina ny takelaka tarehy.
Omano ny Carburetor sy tendrombohitra aho ny fihinanana be
Averina indray fa zava-dehibe tokoa ny fisorohana ny fivoahan'ny rivotra. Tokony hamboarinao ny gasket be loatra mba hahafahan'ny carburetor hifanaraka amin'ny tsiranoka mihinana. Mampiasà rakitra handraketana ny fiakarana sy ny burrs rehetra. Rehefa mahita metaly miboridana eny rehetra eny ianao, dia fantatrao fa tsy manana teboka avo intsony ianao. Aza hadino ny mamoaka fantson-drivotra mba hialana ireo sombintsombiny. Ny kitapo karbika dia misy gasikara samy hafa habe satria io kit io ihany no azo ampiasaina amin'ny carburetor lehibe kokoa. Hamarino tsara fa manana gasket habe marina ianao. Ny gasket faharoa dia manampy amin'ny insulate ny carburetor amin'ny hafanan'ny motera.
Mametraha gasket roa amin'ny manifold fihinanana. Ampiasao ny rantsan-tananao ary hosory menaka manitra ireto gasket ireto mba hiantohana ny tombo-kase entin'ny rivotra. Hamarino tsara fa manana gasket habe marina ianao. Ny gasket faharoa dia manampy amin'ny insulate ny carburetor amin'ny hafanan'ny motera. Mampiasà wrench 7/16 hanenjana ireo voanjo roa. Ireo voa ireo dia tokony ho henjana fa aza hadino ny manenjana loatra.
Apetraho eo amin'ny samy hafa gaskets roa.
Mampiditra Vita Carburetor ho be
Carburetor hanenjanana kokoa ny voanjo
Hametraka Timing Advance sy Throttle Linkage
Solafaka ny throttle mialoha indray hisolo toerana sy ny retainer horonantsary.
Advance Throttle Retainer Clip
Soloy ny fifandraisana amin'ny throttle. Jereo fa ny ampahany fisaka amin'ny fifamatorana dia mifanohitra amin'ny faritra fisaka amin'ny paosin'ny throttle sy ny sandan'ny fotoana mialoha. Hamafiso ny visy mba tsy hilalao ny rohy fa tandremo sao tery.
Hanitsy ny fotoana Advance Base
Ampiasao ny wrench 5/16, ampifanaraho ny fototr'asa mba hanombohan'ny kodiarana hatrany amin'ny fotony aloha amin'ny marika "manomboka". Rehefa navadika ho mandroso ny throttle dia ahodino ny faran'ny lafiny fototra mialoha ny fotoana mba hisokafan'ny fantsom-baravarana ny valizy lolo.
Soloy ny Air Silencer sy Face Plate
Esory ny fanjaitra miadana miadana sy ny voanjo fonosana. Soloy ny fahanginan'ny rivotra.
Esory ny voanjo fonosana ho an'ny jet hafainganam-pandeha. Soloy ny silencer rivotra amin'ny visy miisa 4. Soloy ny voanjo sy fanjaitra miadana haingana. Ankehitriny ianao dia afaka manamafy ny voanjo fonosana mba hametahana ireo mpanasa lamba fonosana amin'ny fanjaitra. Aza hadino ny mihamafy. Ny fanjaitra miadana miadana dia tokony ho afaka mihodina amin'ny rantsan-tananao fa misy fikorontanana ampy hitazomana ny fanitsiana. Ampiasao ny rantsan-tananao, aforeto ireo fanjaitra miadana sy haingam-pandeha mandra-pahatongan'ny snig ary avy eo miverina miverina 1.5 ho teboka fanombohana fanitsiana. Soloy ny takelaka tarehy, bokotra kenda ary bokotra miadana sy haingam-pandeha.
Ny carburetor izao indray miaraka ary vonona ny tanky fitiliana sy ny fanitsiana.
Fanitsiana ny Avo sy ny Slow Speed ​​Needle Valves
Ny fanitsiana ny carburetor ao anaty tanky dia tsy mitovy amin'ny fanitsiana ny rano misokatra. Azonao atao ny manao ny toerana misy anao ao anaty tanky ary alaoo tsara avy eo ny fantson-drano rehefa mivoaka anaty rano ianao.
Sokiro ao ambany (hafainganam-pandeha ambony) fanjaitra mandra-mipetraka ary avy eo dia miverina hiala 1 indray.
Sokiro an-tampon'ny (miadana hafainganam-pandeha) fanjaitra untill mipetraka ary avy eo dia niverina avy 1.5 ny fandehany.
(High Speed) Hanomboka maotera (dia hihazakazaka lava volo tsara tarehy), manilika an nandroso fitaovana, ento ho feno throttle. Ao amin'ny fizarana ny 1 / 8 kosa, miandry ny maotera mba hamaly eo nifandimby, manomboka nitodika tany amin'ny hafainganam-pandeha ambony ambany fanjaitra miditra tsimoramora. Ianao kosa hahatratra ny teboka ny maotera, dia hanomboka ho faty na avy na nandrora indray (toy ny feo malemy fanahy no ifoteran'izany). Tamin'izany fotoana, miverina ny fanjaitra miditra tsimoramora 1 / 4 indray. Tao anatin'ny izany 1 / 4 miverena, ianao mahita ny smoothest toerana.
(Low Speed) Mandehana mora ny maotera nidina ho any amin'izay mihazakazaka mijanona fotsiny. Fiovan'ny ho tsy miandany. Indray amin'ny fizarana ny 1 / 8 mitodika, manomboka mba hampody ny ambony fanjaitra miditra tsimoramora ao. Andraso segondra vitsy ny maotera hamaly. Rehefa miala ny miditra tsimoramora ao, dia hitombo ny rpms. Hampidina ny rpms indray aiza ny maotera, dia nihazakazaka hijanona fotsiny. Farany ianao namely ny fotoana izay ny maotera avy te ho faty, na dia handrora indray. Ary koa, amin'izay fotoana izay, miverina ny miditra tsimoramora 1 / 4 indray. Tao anatin'ny izany 1 / 4 miverena, ianao hahita ny hafainganam-pandeha miadana smoothest toerana.
Rehefa vita ny fanitsiana etsy ambony, anao dia tsy hisy antony hifindra azy indray raha tsy ny carburetor fouls / ramy niakatra avy nipetraka teo, izay Raha ho takiana mba hanala, madio, ary hanorina indray ny carburetor ihany.
Fidio ny fandikan-teny
Select LanguageanglisyafrikaansalbaneyAraboArmenianaAzerbaijanibasqueBelarusianBengaliBosniakabiolgaraCatalanCebuanoSinoa (Notsorina)Sinoa (Nentim-paharazana)Malagasy CroatianCzechdanoàAnarana iombonanaEsperantoEstonianaFilipinofinoafrantsaygalisianaZeorzianaalemainagrikaGujaratiHaitian CreoleHausahebreoHindiHmonghongarianaislandeyIgboindonezianinairlandeyItalianaAnaranaJavaneyKannadaKhmerKoreanaLaoLatinaEndrik'anaranalitoanianinaMasedonianaMalayMaltaisMaoriMarathiMongolianaNepaliNorvejianaPersianinapoloneyportogeyPunjabiMalagasy RomanianRosianaSerbaSlovakySlovenianinaSomaliEspaniolaSwahilisoedoaTamilTeluguThaiTiorkaOkrainianaUrduvietnamianavalesaYiddishYorubaZulu
Fanampiana hanohana ity tranonkala ity
Azafady tsindrio ny rohy etsy ambony alohan'ny fiantsenana Amazon or eBay. Tongasoa ireo mpiantsena iraisam-pirenena
Ireo mpamatsy ho an'ny Evinrude Johnson Suzuki Outboard sy Stern Drive
Aluminum sy vy matevina
Toro-lalana mifantina an'ny BRP
Katala misy mpitazona kodiarana ao Michigan ho an'ny marika rehetra
Mpilalao baolina kitra
For Outboards Evinrude
Ho an'ny Mercury Outboard
Ho an'ny Yamaha Outboards
Ho an'ny Honda Outboard
Mpampiasa ofisialy Champion de partenariat
Kilalaon'afo plug Wire
Fanondroana ny tsipika mitsivalana
(Mora kokoa ny mampiasa 2018 noho ny 2019)
User kaonty sakafo
Theme avy Danetsoft ary Danang Probo Sayekti aingam-panahy Maksimer